ဖားကန့် NLD ဥရုချောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအရေး ဆွေးနွေး
ကြာသပတေး, ၂၀ ဇွန် ၂၀၁၃	Mizzima Burmese
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ဖားကန့် NLD ဥရုချောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအရေး ဆွေးနွေး
ဖားကန့် NLD ဥရုချောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအရေး ဆွေးနွေး	ဖနိဒါ	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၂၂ မိနစ်	ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အဖွဲ့ဝင်များ၏ လပါတ် အစည်းအဝေးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် ဥရုချောင်း ဆယ်ယူရေးကိစ္စများ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ဟု သိရသည်။မိုးကောင်း၊ ဖားကန့်နှင့် ဗန်းမော် မြို့နယ်များတွင် လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမပေးခဲ့ဘဲ ရွှေ့ဆိုင်းထားမှုကို ပြန်လည် ကျင်းပပေးနိုင်ရန်နှင့် ဥရုချောင်း မြစ်ရေလျှံမှုမှ ကာကွယ်ရေးကိစ္စများကို ဖားကန့်မြို့နယ် ပါတီရုံးတွင် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။“ဖားကန့်မြို့နယ် မိုးတွင်းကျရင် ခံရမယ့်ဟာတွေပေါ့။ ဥရုချောင်း ပျက်စီးမှုကို ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ စုပေါင်းကာကွယ် လုပ်ဆောင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြဖို့။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ သုံးနေရာ ပြန်လုပ်ပေးဖို့ ဗဟိုကို တင်ပြပြီးတော့ ဗဟိုကနေ ဆင့်ကဲ ပြန်တင်ပြဖို့ ဆုံးဖြတ်တယ်”ဟု NLD မြို့နယ်စည်းရုံးရေးမှူး ဦးဟန်မြင့်က ပြောသည်။ဖားကန့်မြို့တွင် မိုးတွင်း နှစ်စဉ် ရေးကြီး၍ ရေလွှမ်းလေ့ရှိရာ မိုးမကျမီ ဥရုချောင်းအတွင်း ပိတ်ဆို့နေသော မြေစာများ ရှင်းလင်းရန်အတွက် NLD ဗဟိုဌာနချုပ်ကို တင်ပြသွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။၁၉၉၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ပိုမိုဝင်ရောက်လာသော ကျောက်တူးကုမ္ပဏီများက မြေဇာများကို ဥရုချောင်းထဲ စွန့်ပစ်ကြသဖြင့် ရေလမ်းကြောင်းများ ပိတ်ဆို့ရာမှ မိုးရာသီတွင် ရေလွှမ်းရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များက ပြောသည်။၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက ဖားကန့် လုံးခင်း၊ ဆိပ်မူ၊ နန့်မဖြစ်နှင့် ဖားကန့်မြို့ အောက်ဘက် ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာများတွင် ဥရုချောင်း ရေလျှံတက်လာကာ နေအိမ်အများအပြား ရေနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။ဥရုချောင်းတလျှောက်ရှိ ကျောက်စိမ်းတွင်းများမှ စွန့်ပစ် မြေစာများကြောင့် ချောင်းတိမ်ကောရပြီး စွန့်ပစ် မြေစာပုံများ ပြိုကျမှုကြောင်း ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း လူအနည်းဆုံး ၃ဝ ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ဥရုချောင်းသည် မြောက်ဘက် အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကျောကန်တောင်တန်းသေမှ အစပြုကာ အနောက်မြောက်မှတောင်ဘက်သို့ စီးဆင်းလာပြီး ချင်းတွင်းမြစ်ထဲသို့ စီးဝင်သွားသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုများကြောင့် မန္တလေးခရိုင်အတွင်း တစ်ရက်လျှင် လူသုံးဦး အသက်ဆုံးရှုံးနေ
ရန်ကုန်ဘဆွေ၏ 'မြန်မာပြည်သား' ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမည်
တစ်ရက်အတွင်း အမျိုးသမီးနှစ်ဦး မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်
၉၆၉ ဂဏန်းဖြင့် စီးပွားရေး လမ်းညွှန် ဝဘ်ဆိုက် တခု တည်ထောင်မည်ဆို
မြစ်ကြီးနား စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းများသို့ အမျိုးသားပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း လှူဒါန်းမည်
ပျက်စီး ထားဝယ်ကားဝင်း မပြုပြင်နိုင်သေး
အိုင်အယ်လ်အိုမှ ချမှတ်ထားသည့် တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်များ အပြီးအပိုင်ရုပ်သိမ်း
ပုသိမ်မှာ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်းဖွင့်လှစ်	တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကြောင့် ဆေးရုံနှစ်ခုအတွက် ဆရာဝန်များ ချထားပေးလိုက်	ပုသိမ် NLD ရုံး နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်	ယခင်အစိုးရ လုပ်ရပ်မှားများကို ကျူးလွန်ခဲ့သူများ လက်ခံရန်လိုအပ်ဟု ဒေါ်စု ပြော ဒေသန္တရ အမိန့်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ၈ မြို့နယ်ရှိ NLD ထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ပြန်	NLD အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့တွင် လူဟောင်းအများစု ဆက်လက်ပါဝင်ပြီး ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်ရှိ	ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ကုလအကူအညီ ယနေ့ည ဖားကန့်မြို့သို့ ရောက်မည်	Who is Online
We have 181 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved